Wararka kale Ee suuqa Kala Iibsiga iyo wargaysyada Yurub
Wakiilka Matthijs De Ligt ee Mino Raiola ayaa hadda ku sugan magaalada Paris si uu iskugu dayo in uu kooxda PSG heshiis kala gaadho saxiixa De ligt waxayna PSG miiska soo saartay dalab ka qaalisan inta ay Barcelona ku doonayso kabtanka Ajax ee De Ligt. ( Di Marzio)
Liverpool ayaa markan u jeesaday gool dhaliyaha kooxda FC Porto ee Moussa Marega kaas oo €30 milyan yuro lagu qiimaynayo. ( Foot Mercato)
Xidiga kooxda PSG ee Neymar ayaan ku faraxsanayn joogitaankiisa horyaalka France wuxuuna si wayn u doonaya in uu dib ugu soo laabto Barcelona. ( SPORT)
La taliyayaasha De Ligt ayaa u sheegay da’yarkan inuu ku biiro koox sida Manchester United oo kale ah halkaasoo uu boos joogta ah ka helayo waxayna u sheegeen in Barcelona ay kadib la soo wareegi doonto. (Sport)
Paulo Dybala ayay aad suurtogal u tahay in uu ka mid noqon doono ciyaartoyda xagaagan ka bixi doonta kooxda Juventus kadib markii imaatinka Cristiano Ronaldo uu horumarkiisii curyaamiyay. ( SkySports)
David de Gea ayaa loo diyaariyay in uu wada xaajood cusub la yeesho Manchester United si ay u sii socdaan wada hadaladii heshiis cusboonaysiinta ee Old Trafford.(Telegram)
Manchester United ayaa xidhiidh kala sameysay Barcelona saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Croatia 31 sanno iirka Ivan Rakitic. ( Sport)
Kooxda reer China ee Dalian Yifang ayaa Arsenal ku wargalisay in ay bixyaan £25m si ay ula saxiixdaan xidiga reer Belgium ee Yannick Carrasco. ( Evening Standard)
Tottenham ayaa Isku dayaysa in ay Man United Iyo Liverpool ka dul qaado saxiixa xidiga kooxda Sporting Lisobon ee Bruno Fernandes kaas oo ay Spurs ka gudbisay dalab £62m ( O Jogo)
Marcelo ayaan doonayn in uu xagaagan ka baxo kooxdiisa Real Madrid inkasta oo ay booskiisa difaaca midig Madrid u soo iibsatay Ferland Mendy oo heshiiskiisa lagu dhawaaqi doono. (ESPN FC)
Ole Gunnar Solskjaer ayaa doonaya in uu la soo saxiixdo Harry Maguire iyo Aaron Wan-Bissaka iyada oo labadan xidig ay Man united ku kharash garanayn karto £130m ( Standard)
Atlético Madrid ayaa kooxaha Man Unied, Real Madrid, Barcelona iyo Man City kula soo biirtay saxiixa da’yarka kooxda Benfica ee João Félix waxayna Atletico dookha kowaad ee badalka Antoine Griezmann ka dhigatay saxiixa Felix iyada oo waliba diyaar u ah in ay bixiso lacagta heshiiskiisa lagu burburin karo oo 120 milyan yuro ah.. ( AS)